Egwuregwu ọhụụ ekpughere site na Oppo K3 na akwụkwọ ndekọ aha ya | Gam akporosis
Egwuregwu ọhụụ ekpughere site na Oppo K3 na ọkwa ya
Oppo na-akwadebe ugbu a ịmalite smart ekwentị Oppo K3 na China, nke yiri ka ọ ga-anọchi ya Oppo K1.
Ugbu a, tupu mmalite nke ekwentị, nke ga-eme na May 23, ụlọ ọrụ ahụ ekerịtala ihe mmado ohuru site na Weibo, nke na-ekpughe nkọwa ya.
Akwụkwọ a na-ekpugheghị n'okpuru na-akwado nke ahụ ngwaọrụ ga-akwado ya site na nhazi ya Snapdragon 710 site na Qualcomm. Ọ na-egosikwa nsụgharị nke smartphone, na-akwado na ọ na-egosipụta mmapụta n'ihu snapper.
Oppo K3 akwụkwọ mmado
Na azụ, mobile nwere ihe mmetụta igwefoto abụọ, enịm vetikal na ọnọdụ etiti dị n'elu. Enweghi ihe mmetụta mkpịsị aka a na-ahụ anya, na-akwado na ekwentị ga-abịa na nkwado maka ihe mmetụta mkpịsị aka na-egosipụta.
A hụkwara ekwentị na nso nso a n'ọbá akwụkwọ ngwaahịa nke China Unicom, nke kọwara ọtụtụ nkọwa ya. N'ebe ahụ ka edebanyere aha ya na nọmba 'PCGM00' wee gosipụta ya na Snapdragon 710 ahụ e kwuru na mbụ, yana 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa dị n'ime.
N'aka nke ozo, dika akuko si puta, o gha abia na agba agba ato: Nebula Purple, White and Black. Ekwentị ga-abata na ọdụ ụgbọ mmiri USB-C ma nwee ike ịkwado ya Batrị 3,700 mAh nke nwere 20 W nkwado ngwa ngwa.
Ndị ọzọ leaks kọrọ na Oppo K3 dị ka ama Real X tọhapụrụ n'oge na-adịbeghị anya. Na-esote nke a, ọ nwere ike ịbịa na RAM atọ na ụdị ROM: 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, na 8GB + 128GB.
Banyere ahịa, kwesiri ibu oke onu ahia karie Realme X, nke ewepụtara maka ihe na-erughị euro 194 ka ọ gbanwee n'ụdị ya dị ọnụ ala, nke nwere 4 GB nke RAM na 64 GB nke ROM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Egwuregwu ọhụụ ekpughere site na Oppo K3 na ọkwa ya
John Wick na-agbaso nzọụkwụ nke Thanos na Fortnite